काठमाडौंमा कति र कस्ता अपराध ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार काठमाडौंमा कति र कस्ता अपराध ?
काठमाडौंमा कति र कस्ता अपराध ?
काठमाडौं–राजधानीको जनघनत्व बढ्ने क्रमसँगै चोरी, ठगी, हत्या, बलात्कारलगायतका आपराधिक घटना पनि भइरहेका छन् । यद्यपि, उपत्यकाको सुरक्षा अवस्था सुधार भएको प्रहरीको दाबी छ । काठमाडौं विश्वकै सुरक्षित सहरमध्ये एक भएको महानगरीय प्रहरीका प्रमुख एआइजी प्रतापसिंह थापाले दाबी गरे । प्रहरी सक्रियताकै कारण उपत्यकामा ठूला अपराध हुन नपाएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले बताए । गुन्डागर्दीविरुद्ध प्रहरी आक्रामक बन्दा पनि अपराधमा केही सुधार आएको छ । नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनालीको रिपोर्ट :
दैनिक १५ दुर्घटना, १२ देखि ६ बजे धेरै
उपत्यकामा दैनिक १५ दुर्घटना हुने गरेका छन् । हरेक महिना राजधानीमा हुने दुर्घटनामा १० देखि २५ ले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । वैशाखमा मात्र पाँच सय ९६ दुर्घटना भएकोमा १८ को मृत्यु भएको थियो भने ३० गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यस्तै, तीन सय ८० जना साधारण घाइते भएका थिए । उपत्यकामा दिउँसो १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन् ।
कहाँ हुन्छ धेरै दुर्घटना ?
काठमाडौंमा कलंकी, सीतापाइला, नयाँ नैकाप, बालाजु, बाँसबारी, चन्डोल, बत्तीसपुलती, सिनामंगल, कोटेश्वर, हलचोक, चाबहिल, माछापोखरी, बबरमहल, नागढुंगा, जोरपाटी ओरालो तथा बूढानीलकण्ठको चपली घुम्ती धेरै दुर्घटना हुने स्थानमा पर्छन् । ललितपुरमा धोबीघाट चोक र हात्तीवनलाई ट्राफिक प्रहरीले ब्ल्याक स्पटका रूपमा राखेको छ । भक्तपुरको एसओएस चोक र लोकन्थलीदेखि मनहरा पुलबीचको सडकखण्डमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
दैनिक २ चोरी
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा दैनिक औसतमा चोरीका दुई घटना हुने गरेका छन् । साउनमा ४३, भदौमा ६४, असोजमा ४४, मंसिरमा ४३, पुसमा ४९, माघमा ३४, फागुनमा ३४, चैतमा ४७ र वैशाखमा २४ चोरीका घटना भएका छन् ।
दैनिक एक आत्महत्या
उपत्यकामा दैनिक औसतमा एकजनाले आत्महत्या गर्छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार साउनमा ३५, भदौमा ३१, कात्तिकमा ४०, मंसिरमा ३१, पुसमा १६, माघमा ३१, फागुनमा ३३, चैतमा ३४ तथा वैशाखमा ४४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
१० महिनामा ३१ हत्या
साउनदेखि वैशाखसम्ममा राजधानीमा ३१ को हत्या भएको छ । सबैजसो हत्या व्यक्तिगत रिसइबी र आवेगमा भएको प्रहरीको अपराध महाशाखाका डिएसपी दीपक रेग्मीले बताए ।
महिनामा १० बलात्कार
हरेक तीन दिनमा प्रहरीमा कम्तीमा एउटा बलात्कारको उजुरी पर्ने गरेको छ । वैशाखमा १०, चैतमा २२, फागुनमा २२, माघमा आठ, पुसमा नौ, मंसिरमा पाँच बलात्कारका घटना प्रहरीमा पुगेका थिए । धेरैजसो बालबालिकामाथिका घटना हुने गरेका छन् ।
गुन्डागर्दी शून्य, ठगीमा दैनिक ५० उजुरी
गुन्डा नाइकेहरू प्रहरी कारबाहीमा मारिन थालेपछि राजधानीमा गुन्डागर्दी लगभग शून्य छ । तर, विदेश पठाउने नाममा, जग्गा किनबेचको नाममा, जागिर लगाउने बहानामा, व्यापारमा साझेदारीको बहानामा तथा आकर्षक प्रतिफल दिने भनेर पैसा लिई ठगी हुने घटना बढ्दै गरेका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
कोरियन भाषा परिक्षाका लागि यस्तो छ इपिएस शाखाको तयारी
सस्तोमा सुन किन्न खोज्दा ४० लाख गुमेपछि…